YEAR 2017 (80) 2016 (160) 2015 (27) 2014 (68) 2013 (109) 2012 (148) 2011 (59) (3) Month
December (11) November (7) October (14) September (7) August (14) July (17) June (14) May (18) April (20) March (21) February (12) January (5) Arrimaha Bulshada Dhegeyso sheekada lama huraan Kusoo dhawaada sheeko taxane ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha Soomaalida. Sheekada oo la magac-baxday LAMA HURAAN waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay Qaranweynihii S...
30 JUL 2016 Akhri
Barnaamijka Codka Dhegeystaha Halkan ka dhegeyso barnaamijka codka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdullaahi Maxamed Amiin....
GANACSADE FURSAD SHAQO-ABUUR HINDISAY Ganacsade ku nool magaalada Baydhabo ayaa hindisay fursad uu shaqo-abuur ugu sameynayo dad danyar ah iyo barakacayaal aan markoodii hore haysan shaqo ay noloshooda ku maarreeyaan. halkan ka dhegeyso w...
28 JUL 2016 Akhri
DHEGEYSO SHEEKADA LAMA HURAAN Kusoo dhawaada sheeko taxane ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha Soomaalida. Sheekada oo la magac-baxday LAMA HURAAN waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay Qaranweynihii S...
23 JUL 2016 Akhri
Barnaamijka codka dhegeystaha Ku soo dhowaada barnamijka codka dhesytaha, oo dadka Radio Ergo dhegeysta ee ku sugan gudaha Soomaaliya ay figradahooda nagula soo wadaagaan. Waxaa soo diyaariya Cabdulaahi Maxamed Amiin. ...
Buuhoodle: Waa sidee nolosha haweenka ku nool miyiga Haweenka ku nool miyiga Buuhoodle ayaa sheegay ina isbedel ka jiro xaaladda nolosha miyga,inkastoo weli ay adagtahay in ku xirmaan aduunka, iyo inay waxka ogaadaan duruufaha kale ee jira, hadday noqon...
18 JUL 2016 Akhri
Dhegeyso sheekada LAMA HURAAN. Kusoo dhawaada sheeko taxane ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha Soomaalida. Sheekada oo la magac-baxday LAMA HURAAN waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay Qaranweynihii S...
16 JUL 2016 Akhri
QIIMAHA XOOLAHA NOOL EE SUUQYADA SOOMAALIYA Halkan ka dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha nool oo laga soo kala diray magaalooyinka Burtinle oo Nugaal ah, Bargaal oo Bari ah iyo Towfiiq iyo Gaalkacyo oo Mudug ah. Waxaa soo kala diray Ca...
14 JUL 2016 Akhri
Jowhar: Carruurta ku nool tuulada Beerey oo hab dhaqan soo jireen ah carruurtu dugsi quraanka dhigaataa beeraha soo fasho Tuulada Baareey waxey jowhar u jirta 7km waxeyna kaga beegan tahay dhanka bari waxaa degan dad beeraleey ah oo noloshooda dhamaan ay ku tiirsan tahay wax soosaarka , tuuladan waxay ke...
13 JUL 2016 Akhri
Ardayda tuulada Baarrey oo ka shaqeysa beerta macallinkooda (ERGO) - Ardayda wiilasha ah ee dhigata dugsi Qur’aanka keliya ee ku yaalla tuulada Baarrey oo 7 km dhanka bari uga beegan degmada Jowhar ayaa ka shaqeeya beer uu leeyahay macallinkooda. Be...
Jaamac Maxamed Aadan oo nin xoolo dhaqato ahaa, haddase magaalo soo galay kana sameyey horumar Jaamac Aadan Jaamac waa aabe saddex carruur ah dhalay, 4 sano ka hor ayaa xoolihii kaga dhamaadeen abaar jirtay gobolka Sool, markaas oo uu magaallo soo galay ayuu bilaabay nolol cusub. Hadda waa hant...
11 JUL 2016 Akhri
09 JUL 2016 Akhri
Jaamacadda Camuud oo deeq-waxbarasho siisa ardayda dhegooleyaasha ah (ERGO) - Jaamacadda Camuud ee degmada Boorama ayaa deeq waxbarasho oo lacag la’aan ah u fidisa ardayda dhegooleyaasha ah ee ka qalinjebiya dugsiyada sare. Ardaydaas oo hadda wax ka barata i...
08 JUL 2016 Akhri
Dalmar Yare oo dhegeysteyaasha Ergo kala qeyb qaatay munaasabadda Ciidda Maanta oo ah maalinta labaad ee Ciiddul-fitriga, waxaa barmaamijka marti noogu ah fannaanka Dalmar Yare oo ka mid ah fannaaniinta dhallinyarada ah ee ugu caansan Soomaaliya. Dalmar wuxuu ku nool yahay...
07 JUL 2016 Akhri
02 JUL 2016 Akhri